SUSE inozivisa kutsiva kweCentOS uye inonzi Liberty Linux | Linux Addicts
CentOS yaive imwe yeanonyanya kuzivikanwa distros yemaseva, uye imwe yakatorwa nemakambani mazhinji, bhinari forogo yeRHEL (Red Hat Enterprise Linux), kubva kuRed Hat (yava kunzi IBM), inochengetwa nenharaunda uye yemahara. Asi zvakadaro, nenguva isingatarisirwi, zvinhu zvose zvakapinduka, zvichisiya mukaha mukuru wava kuda kuzadzikiswa. Liberty Linux kubva kuSUSE, ndeimwe yedzimwe nzira dzinobatanidza mapurojekiti seAlmaLinux, Rocky Linux, nezvimwe.
Iyo bhizinesi-giredhi inoshanda sisitimu SUSE Liberty Linux yakabuda sechirongwa chitsva chekugadzira imwe nzira huru kune CentOS, asi akazviita chinyararire, pasina mafirework akawanda uye zvakashamisa vakawanda.
Liberty Linux distro iri kuvandudzwa neSUSE ine yayo Open Build Service chishandiso, kubva kumabhanari mapakeji. Official Red Hat RPMs (SRPMs). Kana iri kernel, iyo RHEL kernel haizoshandiswe, asi yakavakirwa paSUSE Linux Enterprise Server (SLES) kernel, asi yakaunganidzwa uchishandisa gadziriso kuchengetedza kuenderana kweRHEL/CentOS.
Kune rimwe divi, Liberty Linux, zvakare inovimbisa kuenderana neSUSE Linux Enterprise Linux uye openSUSE futi, kureva kuti, yakagadzirirwa nzvimbo dzakasanganiswa.
Zvinosanganisira mhinduro dzinonakidza senge SUSE Maneja kufambisa manejimendi ayo uye otomatiki mabasa mazhinji, mukuwedzera pakuva nerutsigiro rwebhizinesi-giredhi (24/7/365 kuburikidza nekutaura, neemail kana nerunhare) uye zvigadziriso, optimization, kusimba, kugadzikana, chengetedzo, yakagadzirirwa nharaunda dzinoda kuwanikwa kwakanyanya. (maseva, makambani, ...) uye anovimbisa kuva imwe yenzira dzakanakisisa dzakabuda panguva ino.
Liberty Linux ipfungwa zvakafanana mune dzimwe nzira kune CloudLinux, kupa mhinduro kune vese vashandisi vakabatwa neshanduko mukukura kweCentOS, kudzivirira CentOS Stream.
Mamwe ruzivo nezve Liberty Linux - SUSE yepamutemo webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » SUSE inozivisa kutsiva kweCentOS uye inonzi Liberty Linux